प्रधानमन्त्री ‘कृषि आधुनिकीकरण’ परियोजनाको रकममा ‘स्थानीय निकाय’ को ब्रम्हलुट ! – NewsAgro.com
August 16, 2017 August 19, 2017 newsagro0Comments कृषि, पर्वत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङको एक नगरपालिका र तीन गाविसमा ‘माछा जोन’, लौ हेर्नुस ! कसरी हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको रकम दुरुपयोग
यो समाचार 8201 पटक पढिएको
दुई करोड ३६ लाख दुरुपयोग हुँदै, सडक निर्माण र डोजर खरिदमा ७८ लाख प्रयोग
पर्वत । सरकारी रकमको दुरुपयोग कसरी हुन्छ, यसको ज्वलन्त उदाहरण भेटिएको छ । आधुनिक खेती प्रणालीमार्फत मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको रकम यो जिल्लाको सडक निर्माण र डोजर खरिदमा प्रयोग भएको पाइएको छ । सरकारले यो बर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रमको केही हिस्सा स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाएको छ । यसरी जिम्मा लगाइएको यो परियोजनाको रकम दुरुपयोग गरी सडक निर्माण र डोजर खरिदमा प्रयोग भएपछि परियोजना नै अलपत्र परेको छ ।
एउटा पकेट क्षेत्रमा रु पाँच लाखका दरले ३४ वटा पकेट क्षेत्रमा आउने रकम रु दुई करोड ३६ लाख छ । सबै स्थानीय तहले उक्त रकम सडक मर्मत तथा विस्तार, डोजर खरिद, आमा समूहका भवन निर्माणलगायतमा छुट्याएका छन् ।
दुई नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न बालीनालीको पकेटक्षेत्र विकासका लागि आएको रकम अन्यत्रै खर्च गरिएको हो । सो रकम गाउँपालिकामा डोजर खरिद, सडकस्तर वृद्धि र आमा समूहको भवनमा खर्च गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा परियोजनाका लागि गाउँपालिकामा रु ७८ लाख बजेट गाउँसभाले सडक निर्माण, आमा समूहका भवनलगायतमा विनियोजन गरेपछि सबै कार्यक्रम ठप्प भएको हो । गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जलजला गाउँपालिकाका धाइरिङ, शालिजा र नाङ्लीबाङका सय हेक्टर जमिन तरकारीको ‘ब्लक’ क्षेत्रमा छनोट भएको छ । गत वर्ष निर्माण थालेको रु ५६ लाखको कृषि उपज संकलन केन्द्र अधुरै छ ।
किसानलाई मिनिपावर ट्रिलर, प्लास्टिक टनेल, साना सिँचाइसमेत गरी करिब रु एक करोड विनियोजन भए पनि अधिकांश काम अधूरै रहेकाले रु ५० लाख बजेट फिर्ता भइसकेको छ । तरकारी ब्लक सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरेमबहादुर खत्री परियोजनाको भवन निर्माणको काम एकतिहाई पनि नभएको बताउनुहुन्छ ।
“जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले परियोजनाको बेवास्ता गर्दा पोहोर माग भएका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । दक्षिण पर्वतको महाशिला, पैँयु र बिहादी गाउँपालिका सुन्तला, तरकारी, वर्षेधान, अलैँंचीलगायतका ब्लक र पकेट क्षेत्रमा विनियोजित रकम पनि गाउँसभाले सडकमै लगानी गरेको छ । जिल्लाभर लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सबै योजना तथा कार्यक्रमबारे अन्योलता छ । गाउँसभाले शीर्षकान्तर गरी सडक र आमा समूहका भवनमा रकम विनियोजन गरेपछि यहाँका किसान आक्रोशित बनेका छन् ।
बजेट विनियोजन गरिएका छवटा स्थानीय तह तथा वडा वित्तीय समानीकरणका कार्यक्रमबारे अनविज्ञ हुँदा परियोजना अन्योलमा परेको हो । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी शीर्षकान्तर कार्य सच्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
← बाढीको डुवानमा परेको क्षेत्रमा यसरी गरौं वैकल्पिक खेती !
किसानलाई प्रति लिटर दूधको ४.१६ पैसा बृद्धि, दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर ७० पुग्यो ! →